October 2021 - Newposts
ငယျငယျက ဆိုခဲ့တဲ့ကဗြာလေးက တဘောငျဖွဈနမှေနျးခုမှသိတော့တယျဗြာ….
October 31, 2021 newposts2021 0
” ဤ တဘောင်ကို အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲသူများသို့ ” အဖိုးကြီးအို ခါးကုန်းကုန်း မသေပါနဲ့အုံး ရှေးနှစ်ခါ တန်ဆောင်မုန်းပွဲကြည့်ပါ အုံး။ သိသူဖော်စား မသိသူ ကျော်သွား တဘောင်များ အဖိုးကြီးအို ခါးကုန်းကုန်း ဆိုသည်မှာတို့တတွေဟာ ဘဝတိုင်း ဘဝတိုင်း အဖိုးကြီး အမေကြီး ဘဝနဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးကြီးနဲ့ သေရတဲ့ […]
ရင်ထဲမှာ နင့်နေအောင်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅) မျိုး
ရင်ထဲမှာ နင့်နေအောင်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅) မျိုး မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်က ခန့်မှန်းရခက်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ စိတ်ထဲရှိတာက တစ်ခြား၊ အပြုအမူက တစ်ခြားဖြစ်နေတတ်လို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက မိန်းကလေးတွေဟာ အရမ်းဂရိုစိုက်ခံချင်၊ အရမ်းအချစ်ခံချင်တဲ့သူတွေပါ။ အဲလို ဂရုစိုက်၊ အချစ်ခံရအောင်လည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိးစားတတ်ကြပါတယ် ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ချစ်သူအပေါ်မှာ ဆိုးပေမယ့် […]
ခိုးပြေးခံရတဲ့ မိန်းကလေး နဲ့ လာတောင်းခံရတဲ့ မိန်းကလေး ဘာကွာလဲ သိချင်သူများအတွက် ခိုးပြေးလို့ လက်ထပ်ရတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်တန်ဖိုးနဲ့ တင့်တောင်းတင့်တယ် လူကြီးစုံရာနဲ့ တင်တောင်းခံရတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်တန်ဖိုး ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ဘူး ။ ပစ္စည်းတောင်မှ သူ့တန်ဖိုး အလျောက် ဈေးကြီးပေးဝယ်တာနဲ့ ခိုးပြီးအလကားရတဲ့ ခိုးရာပစ္စည်း […]
ထိချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ ရေးသားလာတဲ့ ဒေါင်းရဲ့စာတစ်စောင်
တစ်ဖက်ရပ်ကွက်ကို ထိချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ ရေးသားလာတဲ့ ဒေါင်းရဲ့စာတစ်စောင် သရုပ်ဆောင် မင်းသား ဒေါင်းကတော့ ပီပြင်ပြောင်မြောက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အထူးနှစ်သက်အားပေးမှုကို ရရှိထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလအစကတည်းက ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ပေးေ နတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကနေလည်း လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေကို တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ပေးနေ […]
ဆရာမင်းသုခရဲ့ 2021ခုနှစ် (11)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟာစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးအတွက် တနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးများသည်အလုပ်အကိုင်အောင်မြင်မှုနှင့် ကြုံတွေ့မည်။ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေများနှင့်ဆုံမည်။ မမျှော်လင့်ထားသောအကူညီများရရှိမည်။ ဤလတွင် အလုပ်နှစ်ခု တစ်ပြိုင်နက်တည်းမလုပ် သင့်ပါ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်တတ်သည်။ အပြိုင်အဆိုင် မနာလိုသူပေါများမည်။ ခရီးရှည် ရက်ရှည်ခရီး မထွက်သင့်ပါ။ သူများဦးစီးသောခရီးဝေး မထွက်သင့် ပါ။ အစားအသောက်မှား၍ အစာအဆိပ်သင့်တတ် […]
ထနျတလနျမွို့အတှကျ လကျစားခမြှေု (ရုပျသံ)
ထန်တလန်ကိစ္စ လက်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင် နေဝင်းမြေး ပိုင် Omni Focus YBS 20 ယာဉ်ကို ခရီးသွားပြည်သူများကို ဆင်းခိုင်းပြီးမှ မီးပုလင်းပစ် မီးရှို့ဟုဆို ချင်းပြည်နယ်၊ ထန်တလန်တွင် စစ်ကောင်စီက ပြည်သူအိမ်များကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးသည့်အတွက် လက်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင် နေဝင်းမြေး လုပ်ကိုင်နေသော Omni […]
ယောက်ျားပိန်းမထိုက်သော ဘုန်းကံမြင့်သော မိန်းမများ အမျိုးသမီးများအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေသောပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်
ဘုန်းကံမြင့်သော မိန်းမများ အမျိုးသမီးများအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေသောပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ် အစွန့်ပစ်ခံ မိန်းမသားတို့၏ ဘုန်းကံဆိုတာ ယောက်ျား ဖြစ်သူကထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ ချစ်သူကထားခဲ့လို့ ဖြစ်စေ အငယ်အနှောင်းယူသွားလို့ဖြစ်စေ …. အပြစ်ရှာ ထွက်ခွာလို့ဖြစ်စေစွန့်ပစ်ခဲ့ရင် မိန်းမ တချို့ ဘဝ ပျက်မတတ်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်….အမှန်က ပျော်ရမှာပါလက်ခုပ်တီးပြီးကို ကျေနပ် ဝမ်းမြောက်စွာပျော်နေရမှာပါ…. ကိုယ်ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတုန်း သန်စွမ်းနေတုန်း ရှာဖွေနိုင်တုန်းမှာ […]
ထန်တလန်မြို့နဲ့ ပက်သက်ပြီး ချက်ကျလက်ကျနဲ့ အရှိုက်ထိအောင်ရေးသားလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ ဇနီးမောင်နှံတော့ လက်ရှိမှာမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အရေးတွေကြောင့် ဖမ်းဝရံထုတ်ခံထားရပေမဲ့လည်း ဇွဲမလျှော့ဘဲ အမြဲတမ်းတက်ကြွစွာပါဝင်ပေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း ဝေဖန်ခံရမှုတွေတစ်ချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ နောက် မဆုတ်ဘဲ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရှိနေပေးလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်‌တွေကို ရယူထားနိုင်သူလေးဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုကပီပြင်လွန်းတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင် အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အကယ်ဒမီမင်းသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသုကဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့လက်ထက်ထိမ်းမြားထားပြီးတော့သာယာပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသုကတော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့ အတူလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကနဲ့မတရားအမှုဖွင့်ခံရထားပြီးဘေးကင်းရာကိုတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်၊တိမ်းရှောင်နေစဉ်အတောအတွင်းမှာလဲလူမှူကွန်ယက်ကနေပြည်သူများအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် စာသားတွေကိုရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဘေးကင်းရာကိုတိမ်းရှောင်နေရတာကြောင့်လည်း […]
“လူတွေ သတိမထားမိတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အိမ်မြှောင်ချေး အကြောင်း” အိမ်မြှောင် ချေးတစ်ခုမှာဆိုရင် ထိပ်မှာကပ်လျက်ရှိနေတဲ့ အဖြူရောင်အစေ့လေးကို သိသိသာသာ မြင်ကြရမှာပါ။ အိမ်မြှောင် ချေးတုံးလေးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲရင် အောက်ဘက်မည်းနေတဲ့အပိုင်းက မစင်ဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်က အဖြူရောင် အစေ့လေးက ဆီးဖြစ်ပါတယ်။ လူအပါအဝင် တော်တော်များများသတ္တဝါတွေမှာ ဆီးကို အရည်အဖြစ်နဲ့သွားပေမယ့် အိမ်မြောင်တွေကတော့ အခဲပုံစံနဲ့သွားကြပါတယ်။ အဲ့သည်အဖြူရောင်လေးဟာ […]
လကျရှိတှဲနတေဲ့သူနဲ့ ရစေကျပါ၊ မပါသိနိုငျမယျ့အခကျြ
October 30, 2021 newposts2021 0
ရေစက်သာ ပါလာရင် ကြံဖန်ပြီးဆုံရသလိုပဲ ရေစက် မပါရင် ကြံဖန်ပြီးလွဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေး ကြားဖူးကြ မှာပါ။လူတိုင်းကရေစက် ပါလို့တွေ့ဆုံကြ သလိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် ဆိုတာ လည်း အတိတ်ဘဝကဆုံဖူး ဆုတောင်းခဲ့ ဖူးတဲ့ ဆုတောင်းတွေကြောင့် အခုဘဝ မှာလက်တွဲ ဖော်အနေနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့တယ်လို့ ယုံကြည်ကြ ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကိုယ်တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ […]